Ukubukezwa kwe-Semalt: I-Amazing Python Web Scraping Tool
Izigidi zabasebenzisi bewebhu zifuna izinto eziningana kwi-inthanethi nsuku zonke . Bahlose ukuzuza imiphumela ethile, ngokuqoqa lonke ulwazi abaludinga ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi ngaleyo ndlela benze ibhizinisi labo liphumelele. Ngenxa yalokho, bahlahlela amawebhusayithi ukuqoqa yonke idatha abayidingayo bese bayigcina kukhompyutha yabo. Futhi enye yamathuluzi amakhulu we-web scraping , angakwazi ukukhipha idatha nge-blink of iso, yi-Scrapy!
Isikrini - I-Web Effect Framework Extraction Framework
Isikripthi siyithuluzi lokususa idatha lewebhu elimangalisayo elingasetshenziswa ngabanye noma amabhizinisi angawuthola umsebenzi ngesikhathi esithile - good year ultragrip ice 2. Ivumela abasebenzisi ukuthi bagxile kwisitoreji sedatha, ngokusebenzisa izikhethi ze-CSS. I-Scrapy iyi-framework ye-Python enikeza abasebenzisi bayo zonke izinketho eziphambili ekuqedeni umsebenzi wabo futhi bathole yonke idatha abayifunayo ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi. Ngaphandle kwalokho, ungawagcina kumafomethi athile kukhompuyutha yakho.
Abasebenzisi bewebhu kumele bakhumbule ukuthi i-Scrapy iyisiteji esimangalisayo esizisiza ukuba sikhiphe yonke into efanelekile, futhi sizulazula ngamakhasi afanelekile.
Okokuqala, kufanele ufake iPython ohlelweni lwakho lokusebenza. Khona-ke ungakwazi ukumane ulande loluhlaka kusuka kusiza sawo esisemthethweni.
Into elandelayo okumelwe ukwenze ukudala iphrojekthi ye-Scrapy ngemuva kokuthola isiqondisi ofuna ukuyigcina. Bese ubutha yonke idatha yabo bese uyigcina endaweni eyodwa ukuze uyithole noma nini lapho uthanda khona.
Indlela engcono kakhulu yokuqoqa idatha ngobuningi nge-Scrapy ukusebenzisa i-shell ye-Scrapy. Ungasebenzisa i-Xpath ukukhetha izakhi ezihlukahlukene ezivela kumadokhumenti e-HTML. Ngokuqondile, isicabucabu se-Scrapy sinesibopho sokuchaza indlela olandela ngayo izixhumanisi ezithile ngokukhahlaza ngewebhusayithi. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukukhipha yonke imininingwane edingekayo emakhasini abe nezakhiwo zeDython ezahlukene.
Ngokusebenzisa uhlelo lwesicabucabu, ungalanda noma yikuphi okuqukethwe okufunayo. Udinga nje ukubhala izikhawu zenkambiso yamakhasi ewebhu ahlukahlukene. Futhi, udinga ukubhala ikhodi ukuguqula idatha eqoqwe ngendlela efakwe kahle futhi uyigcine kukhompyutha yakho.